Twitter sy horonan-tsary, toy ny dibera voanjo sy jelly | Martech Zone
Twitter sy horonan-tsary, toy ny dibera voanjo sy jelly
Alatsinainy Janoary 12, 2015 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Mazava ho azy fahitalavitra dia fampitaovana nentim-paharazana napetraka, fa rehefa manampy fihetsika efijery faharoa kosa toa hitako fa tsara kokoa noho ny hafa ny mpampita vaovao sasany. Eo anelanelan'ny Facebook sy Twitter dia mahita resaka maro hafa mitranga ao anaty Facebook aho fa tsy amin'ny Twitter. Saingy ao amin'ny Twitter, mahita lahatsoratra maro hafa aho izay mety na tsia hevitra tsy ara-dalàna.
Raha variana amin'ny fahitalavitra aho dia tsy azoko antoka fa te-hirotsaka amina resadresaka na adihevitra mihazakazaka aho - ka tsy tena mety amiko ny Facebook. Ary koa, ny finoako fa ny tenifototra dia nampidirina lalina ao amin'ny fihetsiky ny mpampiasa Twitter. Milamina tsara amin'ny tenifototra ny fahitalavitra… miaraka amin'ny seho sy dokambarotra marobe ankehitriny miaraka amina tenifototra tokana rehefa mijery ianao.
Ka… misy fihetsika ataon'ny mpampiasa Twitter ve mampifandray azy ireo amin'ny fahitalavitra? Sa resaka tsotra fotsiny amin'ny fampindram-bola antonony ho tsara kokoa amin'ny fihetsika faharoa? Ny finoako dia ity farany! Na izany na tsy izany, tsy isalasalana fa misy fifandraisana lehibe eo amin'izy roa.
Maka ny taratasy fotsy ary miaraka amin'ny infografika, hitantsika fa ny mpampiasa Twitter dia mazàna mijery TV ary afaka mitaona ny fanapahan-kevitry ny hafa raha ny resaka hoe "inona no hojereko manaraka?" Izy ireo koa dia azo inoana kokoa fa hotadiavina noho ny heviny amin'ny fahitalavitra, ary tena mirotsaka an-tsehatra ao anatin'ny habaka. Tetezana Gavin, IPSOS
Ity ny infographic IPSOS. Aza hadino ny misintona ny whitepaper, Ny vokany Twitter: Fahatakarana ny andraikitry ny Twitter amin'ny fitondran-tena amin'ny fahitalavitra, ho an'ny antsipiriany fanampiny.
Tags: Efijery faha-2ipsosfahitalavitra faharoafahitalavitrafihetsika amin'ny fahitalavitratvfihetsika amin'ny fahitalavitraTwittervokany twitter
Ahoana ny fanamarinana ny famolavolana mailaka mamaly sy ny toerana ahazoana fanampiana!